Indawo entle ebanzi kwaye ekhululekileyo enamagumbi amathathu okulala
Iflethi okanye indlu ekwi-complex (icondo) yonke sinombuki zindwendwe onguMauricio
Ifakwe emantla esixeko, imizuzu emi-5 ukusuka eRecoleta, eHupermall, ePaseo Aranjuez kunye neyona nto inomtsalane esixekweni. Indawo ebanzi, ekhululekile kwaye ezimeleyo ngokupheleleyo, inayo yonke into oyifunayo ngokuhlala ixesha elide kunye nokufutshane, ixhotyiswe ngokupheleleyo.
Ifulethi elizimeleyo ngokupheleleyo kwaye lixhotyiswe kakuhle kumgangatho wokuqala, libanzi kwaye likhululekile. Inegaraji ezi-2, isakhiwo sinethafa kumgangatho ophezulu kunye nombono omhle wesixeko kunye ne-barbecue.
Indawo ezolileyo kakhulu. Ngayo yonke into ekufutshane ekhoyo, eyona ndawo intle yokutyela, indawo yokuthenga, ivenkile enkulu, iiklabhu zasebusuku ezigqwesileyo nokunye okuninzi! Imizuzu nje emi-5 ukusuka eflethini
Ndisesandleni sakho ngayo nayiphi na imibuzo okanye uncedo lwabakhenkethi kunye nolwazi lwezothutho